Siyaasiga Baar-qabka ah: Jamaal Cali Xuseen | Saxil News Network
Siyaasiga Baar-qabka ah: Jamaal Cali Xuseen
Waa mid aynu dhamaanteenba rumaysanahay in qof kasta oo inta uu aduunka jooggo hogaamiye u noqda ummad in suurtogalnimadeedu ay tahay mid xagga RABI laga qoray, isla markaana aanu shaqsigaasi ku kasban ama aanu ku gaadhin kursiga madaxnimo wanaag, xeelad, raga-nimo, hawl-karnimo, aqoon, xirfad, reer-nimo, iyo waxyaabo la mid ah.
Astaamahaasi oo laga dheehan karro kana muuqda inta badan shaqsigaasi, oo uu kaga soocan yahay bulshadda uu la nool yahay, laguna yaqaano oo ka soo muuqda ama ka soo if-baxa habka iyo hanaanka uu qofkaasi u dhaqmo bulshada kalena ula macaamilo. kuwaasi oo ay ka mid yihiin sida uu u fikiro, waxyaabaha uu aaminsan yahay, hankiisa, himiladiisa, waxa uu hiigsanayo, sida uu wax u maamuli lahaa haddiiba uu hogaamiye noqdo iyo waxa uu ku hamiyayo.
Haddaba, waxaan qoraalkaygani uga dan leeyahay ama aan uga socdaa in aan bulshadeena wax yar uga iftiimiyo shaqsiyadda iyo hab-dhaqanka hogaamineed ee ka muuqda musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Cadaaladda iyo daryeelka ee UCID aqoon yahan Jamaal Cali Xuseen. Kaasi oo in yar oo bulshadeena ka mid ahi ay aqoon guud iyo mid gaar ahba u leeyihiin, halka dadkeena intooda badanina aanay wax dhaafsiisan magaciisa aqoonin.
Qoraakani oo aanu si taxane ah ugaga warami doono uguna soo qaadan doono shaqsiyadiisa, heerkiisa aqooneed, khibradiisa shaqo iyo arrimo kale, waxaanau si balaadhan ugu faaqidi doona, uguna lafo-guri doonaa qofka uu yahay Jamaal Cali Xuseen iyo sidoo kale in uu ku haboon yahay ama u qalmo kursiga uu u sharaxan yahay, in uu yahay shaqsi ummad, dal, iyo dawlad hogaamin karra.
Qoraalkani oo noqon doona mid taxane ah, waxaan intii aan ka gaadhi karro isku deyi doona kuna soo qaadi doonaa astaamo iyo calaamaddo u gaar ah aqoon yahan Jamaal iyo sidoo kale waxyaabo uu ku mudan yahay in loo doorto ama uu noqdo hogaamiyaha wadankeena ee mustaqbalka.
Shaqsiyadiisa: Waa Kuma Jamaal Cali Xuseen
Waa shaqsi koobsaday dhamaanba astaamaha lagu garan karro hogaamiye sax ah, oo dadkiisa iyo dalkiisaba horumar gaadhsiin kara. Waa Hogaamiye, hal-door, hiigsi iyo himilo fog leh, waa nin ku sifoobay Karti iyo hawl-karnimo uu ku caan baxay.
Waa iftiin cusub oo u soo baxaya siyaasadda Somaliland. Waa Muraayad laga dheehan karro kartidiisa iyo aqoontiisaba in uu badhaadhe gaadhsiin karro dalka iyo dadkaba. Waa qof ay dhif iyo nadir ku yihiin guud ahaanba geyigga Soomaalidda dadka la kartidda iyo aqoonta ahi, wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka farro-ku tiriska ah ee heerkaasi ka gaadhay aqoonta iyo waayo aragnimadda shaqo.
Murashaxa Jagada madaxtinimada ee Xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen waa Aqoonyahan waa astaan ka mid ah astaamaha laga doonayo hogaamiyaha wanaagsan,wuxuu Jamaal ka soo baxay oo uu ka qalinjabiyey jaamacada aduunka ugu sareysa ee HARVARD UNIVERSITY ,jaamacadan waxa ka soo baxa oo kaliya nin rag ah,aqoonta uu leeyahay waa aqoontii uu ku maamulayey bankgiga caalamiga ah ee city bank ,aqoonta uu leeyahay waa tii uu kaga soo shaqeeyey in ka badan 21 dal oo aduunka ah.
Aqoonta uu leeyahay waa ta maanta ka dhigtay mursharaxa madaxtinimada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID,aqoonta uu leeyahay waa ta uu ku doonayo in uu madaxweyne kaga noqdo Somaliland,aqoonta uu leeyahay waa ta uu ku doonayo inay bulshada reer Somaliland ku doorato,aqoonta uu leeyahay waa ta uu ku doonayo in dadka iyo dalkaba ku hogaamiyo,waana astaamaha ugu waaweyn ee laga doonayo qof kasta oo doonaya in uu dad iyo dalba hogaamiyo.
Musharaxa jagadda madaxweynaha ee xibsiga UCID aqoon yahan Jamaal Cali Xuseen, haddii aan isku dayno in aan tilmaan ka bixino, Waxaan ku sifayn karnaa shaqsi uu EEBE ku galaday aragti fog, aqoon, hawl-karnimo iyo dedaal, waxa kale oo aynu ku sheegi karnaa in uu yahay ninka keliya ee haddii uu maanta hanto kursiga hogaaminta dalka ummadeena ka saari karra caqabadaha dhaqaale darro iyo shaqo la’aanta haysata bulshadeena.
Mana aha nin isagu u baahan ama u socda lacag urursi, hase yeeshee waa nin haysta dhaqaale ku filan, kaasi oo ay u jeedadiisa ama qasidgiisu yahay oo keliya in uu dalkan iyo dadkani bad-baadiyo, isla markaana gaadhsiiyo horumar dhaqaale iyo isku filaansho.
Wuxuu leeyahay dhamaanba astaamaha cadaynta u ah ama laga doonayo in uu yeesho hogaamiyaha wanaagsani, iyadoo ay hubaal tahay in aan la soo koobi Karin sifooyinka uu leeyahay Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo sidoo kale heerka Aqoonta, horumarka iyo aragti-fogaanta uu ka gaadhay waayaha nolosha. Waana nin isku darsaday dhamaanba astaamahaasi oo lagama maarmaan u ah hogaamiye kasta oo doonaya in uu noqdo madaxweynaha dalka.
Waa hubaal iyo mid biyo-kama dhibcaan ah in haddii uu qarankeena hogaamiye u noqdo Jamaal in aynu gaadhi karno wax kasta oo inaga dhiman, iyo hiigsigeena aynu mudadda dheer ku taamaynay,
Jamaal Cali Xuseen, ma aha oo keliya in uu yahay aqoon yahan iyo qof lagu yaqaano in uu ku xeel-dheer yahay arrimaha horumarinta oo qudha, hase yeeshee Jamaal, Waa dhaqan yaqaan, hal-Abuurka qayb weyn ku leh, waxaanu si weyn uga dhex-muuqda fanka iyo suugaanta Somaliland, waxaa intaa u sii dheer inuu hal-abuuro ama curiyo dhinaca qisooyinka, sheekooyinka qosolka iyo maadda ah.
By.Fahad Cismaan Caraale